Mpanao Ady Totohondry Misandratra sy ny Takaitran’ny Adin’Andian-Jatovo ao Lyari, Pakistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2015 6:21 GMT
Ariel maka sary ny morontsirak'i Gwadar. Nihalehibe tao Gwadar i Talha Baloch. ( Wikimedia Commons)
Nosoratan'i Feroz Jan tamin'ny teny Urdu hoan'ny PakVoices ity lahatsoratra ity tany am-boalohany . Nadikan'i Salman Lateef tamin'ny teny Anglisy indray ary navoaka tato amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizarana vontoaty.
Namoy ny ainy tao Lyari, Karachi, ny tovolahy iray raha nifanehatra tamin'ny Rangers, milisy miady amin'ny herisetran-jiolahy sy ny olana araka ny lalàna sy ara-pilaminana ankapobeny ao Pakistan. Fantatra taty aoriana fa i Talha Baloch ilay tovolahy.
Iray amin'ireo tanàna ela niorenana indrindra ao Karachi sady be mponina indrindra ary tafiditra lalina amin'ny politika amin'ny anarana “Gwadari” izy ao Lyari. Tamin'ny voalohany izy dia mpanao ady totohondry malaza avy any an-tanàna amorontsirak'i Gwadar Balochistan.
Araka ny nolazain'ny polisy, dia maty noho ny ratra nahazo azy vokatry ny tifi-basy tamin'ny 18 Febroary 2015 i Talha. Aftab Nizamani, manamboninahitra polisy ambony iray nilaza nandray anjara tamin'ny famonoan'olona nitranga vao haingana nahazo ny mpikambana telo ao amin'ny Antokom-Bahoakan'i Pakistan (PPP) i Talha, ary anisan'ny fanta-daza ao amin'ny andian-jatovon'i Uzair Baloch, izay nanana fifamaliana tamin'ny PPP vao haingana teo. Ao amin'ny mombamomba azy tao amin'ny Dawn.com tamin'ny taon-dasa, dia nofaritana ho “endrika politikan'i Antokom-Bahoakan'i Pakistan ao Lyari” tian'ny PPP hohalavirana ny Uzair.”
Tamin'ny fiverenany an-tanindrazana, nampirintona ny maro ny toejavatra nahafaty an'i Talha. Araka ny nolazain'ny havan'i Talha avy any an-tanàna amorontsiraka dia manana fahaizana mahatalanjona amin'ny fanaovana ady totohondry i Talha fa diso fanantenana tamin'ny tsy fisian'ny fivoaran'asa hoan'ny mpanao ady totohondry. Nilaza izy ireo fa maro ny olona nifandraisana no nampanantena hanome vintana an'i Talha eny ambony ringy saingy tsy nisy ny nanatontosa izany hatramin'ny farany ka nahatonga azy ho kivy. Nilaza ny naman'i Talha fa nitsahatra tamin'ny fanaovana ady totohondry izy ary tsy nahita asa nandritra ny roa taona. Farany indrindra teo izy dia nandao ny tanànany ao Gwadar, nankany Karachi tamin'ny 2008, ary nanorim-ponenana tany Lyari.
Lyari dia fanta-daza tamin'ny famoahana mpanao ady totohondry mahay dia mahay nandritra ny taona maro. Tamin'ny 1988 dia nisy mpanao ady totohondry iray avy ao Lyari antsoina hoe Hussain Shah nahazo ny medaly alimo ho an'ny Pakistan tamin'ny Lalao Olaimpika. Voaravaka ekipam-panaovana ady totohondry maro ny manodidina, saingy nimenomenona ireo mpanazatra fa tsy misy ny fahafaha-mivoatra hoan'ireo mpanao ady totohondry ao aminy.
Tsy vao sambany no nisy mpanao ady totohondry misandratra no maty nandritra ny ady ifanaovan'ny andian-jatovo ao Lyari. Rehefa tafahitsoka ao anatin'ny fahantrana sy ny laza ratsin'ny adin'andian-jatovo ry zareo dia maro no nivadika nankany amin'ny fiainan-jiolahy ary matetika tsy maintsy mananda ny ainy amin'izany. Taloha ny mpanao ady totohondry ao Lyari dia matin'ny andian-jatovo ao an-toerana sy matin'ny Rangers.
Lyari dia malaza amin'ny tsy fitsaharan'ny ady ifanandrinan'ireo andian-jiolahy ao amin'ny faritra. Ampangaina ho mampanao “ady miafina” ao anatin'izany ireo antoko politika sy ny andrim-panjakana, miezaka ny mampanao ho fitaovana politika ireo andian-jatovo ao Lyari ireo. Mitati-baovao ny Dawn fa tanelanelan'ny 2003-2008, dia nahafatesan'olona 500-600 ny gidragidran'andian-jatovo ao Lyari. Tamin'ny 2013 fotsiny dia maherin'ny 100 ny olona maty tamin'ny trangan'herisetra fotsiny tao Lyari.